Myanmar News Zone (မြန်မာသတင်းရပ်ဝန်း) - အလုပ်အခွင့်အလမ်း
သတင်းများ	ဗွီဒီယိုများ	အတွေးအရေး	ဆွေးနွေးခန်း	အလုပ်အခွင့်အလမ်း
United Living Mall (Shopping Centre)
Category: အလုပ်အခွင့်အလမ်း	Published: 24 October 2011	အလုပ်အခွင့်အလမ်းများ အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ရန် ‘အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်’မှ ကူးယူးဖော်ပြပါသည်။ No.48, Kyaikasan Street, Tamway Tsp., Tel: 551177, 551151
• Sales Assistant M/F (20) Posts - အသက် (၁၈-၂၅) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ ပြောဆိုဆက်ဆံမှု ပြေပြစ်၍ ရုပ်ရည်အသင့်အတင့် ရှိရမည်။
• Cashier F (20) Posts - အသက် (၁၈-၂၅) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ပြောဆိုဆက်ဆံမှု ပြေပြစ်၍ ရုပ်ရည်အသင့်အတင့် ရှိရမည်။ Computer Excel ကျွမ်းကျင်ရမည်။
• Security Assistant M/F (20) Posts - အသက် (၂၀-၂၅) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ အခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့် အောင်မြင် ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ နေ့ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ရမည့် အပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်၌ စိတ်ဝင်စားမှု ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
• Driver M (5) Posts - အသက် (၂၀-၄၅)နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနှင်နိုင်ရမည်။ လုပ်သက်အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိရမည်။
အလုပ်လျှောက်လွှာတင်လိုသူများသည် ဓာတ်ပုံ (၃) ပုံ၊ ပညာအရည်အချင်းထောက်ခံစာ၊ လေဘာမိတ္တူ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံစာတို့ဖြင့် ၃၁-၁၀-၂၀၁၁ နောက်ဆုံးထား၍ လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Myint & Associates Co.Ltd.
Category: အလုပ်အခွင့်အလမ်း	Published: 24 October 2011	အလုပ်အခွင့်အလမ်းများ အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ရန် ‘အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်’မှ ကူးယူးဖော်ပြပါသည်။ အမှတ်(၈၄/၈၅)၊ လှိုင်မြင့်မိုရ်လမ်းသွယ်(၁)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ဖုန်း - ၅၀၅၀၇၇၊ ၅၀၇၁၀၀။
၁။ Site Engineer M (5) Posts
-	B.E (or) A.G.T.l (Civil)
၂။ Survey or B.E (or) A.G.T.l M (1) Post ၃။ Estimate Engineer F (2) Posts -	B.E (or) A.G.T.l (Civil and Electrical) Procurement Section
၄။ Procurement Engineer A.G.T.l (Mechanical) M (1) Post
၅။ Procurement Engineer A.G.T.l (Civil) M (1) Post ၆။ Procurement Engineer A.G.T.l (Electrical Power) M (1) Post ၇။ Office Supervisor (Any Graduate) M (1) Post ၈။ Office Coordinator (Any Graduate) M (1) Post ၉။ Export/lmport (Any Graduate) M (1) Post ၁၀။ Store Keeper (Any Graduate) M (1) Post ၁၁။ Asst Store Keeper (Any Graduate) M (1) Post အမှတ်စဉ်အားလုံးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၅)နှစ်ရှိရမည်။ အသက် ၂၅နှစ်မှ ၄၅နှစ်အတွင်း၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။ အထပ်မြင့်အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ lndependent တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
လျှောက်ထားလိုသူများသည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပြည့်အစုံ၊ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ အလုပ်သမားမိတ္တူ၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ ပညာအရည်အချင်း အောင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်အပြည့်အစုံနှင့်အတူ (၃၁-၁၀-၂၀၁၁) နောက်ဆုံးထား၍ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Moe Myitta Hospital
Category: အလုပ်အခွင့်အလမ်း	Published: 23 October 2011	အလုပ်အခွင့်အလမ်းများ အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ရန် ‘အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်’မှ ကူးယူးဖော်ပြပါသည်။ No.(30), 1st Aungmyaythasi Street, 1st Quarter, Kamayut Township. Tel : 523564, 523568
မိုးမေတ္တာဆေးရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အရည်အချင်းပြည့်ဝ၍ အတွေ့အကြုံရှိသော
•	SeniorNurse (အထက်တန်းသူနာပြု) F (3) Posts -	B.N.Sc/Dip in Nursing
-	အမြဲတမ်းလိုင်စင်သက်တမ်းရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
•	Nurse F (3) Posts -	B.N.Sc/Dip in Nursing
-	အမြဲတမ်းလိုင်စင်ရှိပြီး လိုင်စင်သက်တမ်းရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
လျှောက်ထားလိုသူများသည် ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၊ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ပတ်(စ်)ပို့ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာတို့နှင့်အတူ (၃၁-၁၀၀၂၀၁၁) နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Phyo Thant Kyaw Printing & Media Service (ကြေးမုံနှင့် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ ကြော်ငြာအချပ်ပို လုပ်ငန်း)
Category: အလုပ်အခွင့်အလမ်း	Published: 23 October 2011	အလုပ်အခွင့်အလမ်းများ အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ရန် ‘အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်’မှ ကူးယူးဖော်ပြပါသည်။ No.104(E), Bogyoke Aung San Road, Pazundaung Township. Ph-200575, 9000421
•	Graphic Desginer ကျား/မ (၄)ဦး -	Photoshop, lllustrator , DTP ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၂ နှစ်ရှိရမည်။ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးဖြင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။
•	Marketing Staff မ (၅)ဦး
-	ခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ Printing ကြော်ငြာကောက်ခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ (ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာ သွားလာနိုင်ရမည်။)
လျှောက်ထားလိုသူများသည် လျှောက်လွှာ (ကိုယ်ရေးရာဇဝင်)တွင် မျှော်မှန်းလစာပါ ထည့်သွင်းရေးသား၍ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ ပညာအရည်အချင်း အထောက်အထားမိတ္တူ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ ပတ်စ်ပို့ကာလဓာတ်ပုံ (၁)ပုံနှင့်အတူ ၃၀-၁၀-၂၀၁၁ နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Category: အလုပ်အခွင့်အလမ်း	Published: 23 October 2011	အမှတ်(၅၆/ဘီ)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာကျောင်းရှေ့၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။ ဖုန်း - ၆၅၂၉၉၅၊ ၆၅၀၇၅၉
•	ရုံးဝန်ထမ်း မ (၂) ဦး -	Computer ကျွမ်းကျင်သူ ဦးစားပေးမည်။
•	Graphic Designer မ (၂) ဦး -	ကျွမ်းကျင်သူ ဦးစားပေးမည်။
လျှောက်ထားလိုသူများသည် ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းနှင့် အလူ (၂၈-၁၀-၂၀၁၁) နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Journal Goal Media
Buddy Boy Garment
Ju Ju Beauty Salon (အမျိုးသမီးသီးသန့်)
Joyous Journey (JJ) Express
Go & Go Travels and Tours Co., Ltd.
Start Prev 1234567 8910 Next End Page3of 76